Izindaba - Umehluko phakathi kwama-bristles aqinile futhi athambile ekhanda lebhulashi lamazinyo
Kuqhathaniswangamabhulashi wamazinyo aqinile, amabhulashi amazinyo athambile awalimazi kangako emazinyweni futhi athole umusa kubathengi abaningi. Ake sihlolisise umehluko phakathi kwamabhulashi amazinyo athambile nalawo alukhuni, nokuthi amabhulashi wamazinyo athambile asetshenziswa kanjani.
Uyini umehluko phakathi kwesixubho esithambile nesixubho esinzima
1. Umehluko phakathi kwesixubho esithambile nesixubho esinzima
Umehluko osobala kakhulu phakathi kwebhulashi lamazinyo elithambile kanye nebhulashi lamazinyo eliqinile elinokubhinca ukuthungwa kwama-bristles. Ibhulashi lamazinyo eliqinile elinokonakala lingalimaza kalula koqweqwe lwawo ebusweni bamazinyo. Ngaphezu kwalokho, ukunganaki okuncane kungalimaza nezinsini. Iningi labantu lidinga kuphela ukuthenga isixubho esithambile. Kepha ukususa ukungcola emazinyweni, umphumela uyafana noma ngabe usebenzisa isixubho esinzima noma esithambile. Into ebaluleke kakhulu lapho uxubha amazinyo ukuxubha amazinyo akho endaweni efanele.
Ngaphezu kwalokho, noma ngabe isixubho esithambile noma esiqinile, geza kahle ibhulashi lamazinyo njalo lapho ususebenzise, ​​bese ushukumisa umswakama ngangokunokwenzeka ukuze wome futhi uhlanzeke.
2. Isetshenziswa kanjani isixubho esithambile
1. Amabhulashi amabhulashi kufanele abekwe engxenyeni engama-degree angama-45 nobuso bamazinyo, abekwe ngokuvundlile futhi acindezelwe kahle lapho kuhlangana khona intamo yamazinyo nezinsini, axubhe ame nkqo emazinyweni okuvala, futhi azungezise ubristles ngobumnene.
2. Ungasebenzisi amandla amaningi lapho uxubha amazinyo. Shayela kusuka phezulu kuye ezansi lapho uxubha amazinyo aphezulu futhi kusuka phansi kuye phezulu lapho uxubha amazinyo aphansi. Shayela emuva naphambili, hlanza ngaphakathi nangaphandle.
3. Kufanele uxubha amazinyo futhi ugeze umlomo wakho ekuseni nakusihlwa. Uma kungenzeka, xubha amazinyo ngokushesha ngemuva kokudla ngakunye. Kubaluleke kakhulu ukuxubha amazinyo ngaphambi kokulala. Xubha amazinyo akho imizuzu engengaphansi kwemithathu isikhathi ngasinye.
4. Khetha ibhulashi lamazinyo elifanele. Ibhulashi lamazinyo kufanele libe ibhulashi lamazinyo lokunakekelwa kwempilo. Ama-bristles kufanele athambile, indawo ebhulashi iyisicaba, ikhanda lebhulashi lincane, futhi ama-bristles ayindilinga. Lolu hlobo lwebhulashi lamazinyo lungaqeda ngempumelelo uqweqwe lwamazinyo ngaphandle kokulimaza amazinyo nezinsini.
5. Ngemuva kokuxubha njalo, geza isixubho, ubeke ikhanda lebhulashi phezulu enkomishini, bese ulibeka endaweni enomoya futhi eyomile. Isixubho esisha kufanele sishintshwe njalo ezinyangeni ezi-1 ukuya kwezi-3. Uma ama-bristles ehlakazekile futhi agobile, kufanele athathelwe indawo ngokuhamba kwesikhathi.